Ihe nkiri 22 kacha mma nke Bud Spencer, obere ụtụ | Nye m oge ntụrụndụ
Ihe nkiri Bud Spencer kacha mma
Na -adịbeghị anya fnzukọ na Mọnde gara aga, June 27, nke Bud Spencer O were Terence Hill na mberede, onye chọrọ ịmata ihe na Almería. Ọ pụghị ịdị otú ahụ. Obodo nke ya na onye ya na ya kacha mara nka na-ekerịta ọtụtụ oge na 70s ruo 80s.
Na Almería, ebee Terence Hill ekwupụtala na obi dị ya ụtọ, gbawara mgbe ọnwụ ezigbo enyi ha nwụnahụrụ ha, ha gbara égbè ọnụ Ị gbaghara ... Achọghị m (1967), Ndị omekome anọ ahụ (1968) na Ugwu akpụkpọ ụkwụ'(1969), trilogy nke Giuseppe Colizzi dere. Mana enwere ọtụtụ aha ọzọ ...
Carlo Pedersoli, onye bụ ezigbo aha ya, nwụrụ na Mọnde gara aga ka ọ dị afọ 86. Nwa ya nwoke kọrọ: «Papa m jiri nwayọ pụọ na 18:15. Ọ hụghị ahụhụ, o nwere anyị niile nso ya na okwu ikpeazụ ya bụ 'daalụ'.
1 Wasnye bụ? Kedu ka ọ dị?
2 Mmalite ya na sinima
3 Ọmarịcha ogbo ya na Terence Hill
4 Ihe nkiri na Terence Hill
4.1 "Ị gbaghara ... anaghị m eme" (1967)
4.2 "Ndị omekome anọ ahụ" (1968)
4.3 "Ugwu akpụkpọ ụkwụ" (1969)
4.4 "Ha kpọrọ ya Trinidad" (1970)
4.5 "The Black Corsair" (1971)
4.6 "Ụmụ nwoke siri ike" (1971)
4.7 "Ha nọgidere na -akpọ ya Trinidad" (1972)
4.8 "Ma ọ bụrụ na ọ bụghị, anyị na -ewe iwe" (1974)
4.9 "Ndị ozi ala ọzọ abụọ" (1974)
4.10 "Ndị uwe ojii abụọ" (1976)
4.11 Otu dị egwu (1978)
4.12 "Anọ m na hippos" (1979)
4.13 "Hasnye nwere enyi ... nwere akụ" (1981)
4.14 "Super Super Superspeakers" (1983)
4.15 "Abụọ Super abụọ" (1984)
4.16 "Abụọ Super Cops na Miami" (1985)
5 Ụfọdụ ihe nkiri solo
5.1 "Zapatones" (1979)
5.2 "The Supersheriff" (1980)
5.3 "Banana Joe" (1981)
5.4 "Aladdin" (1986)
5.5 "Na njedebe" (1997)
5.6 "Ụmụ ifufe (n'etiti ìhè na ọchịchịrị)" (2000)
Wasnye bụ? Kedu ka ọ dị?
Ihe ijuanya anụ ahụ. Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mita abụọ n'ịdị elu, tụọ kilogram 140 ma ọ mụmụọ ọnụ ọchị n'ụzọ dị mfe.. Ya onwe ya kwetara na ya abụtụbeghị ezigbo onye na -eme ihe nkiri. Onye ọ bụla na -akatọ ihe nkiri ga -ekwu na Carlo Pedersoli enweghị onyinye maka ịkpafu ụzọ ntụgharị. Mana ọ dịghị mkpa: ebe talent ya na -eruteghị n'ihu ya ruru; ọ dịghịkwa mgbe ọ na -agabiga sinima, mana ọ maara ka esi eji aka ya emeri ihuenyo.
Mana ogologo oge tupu agwa Bud Spencer, Perdersoli enweela ndụ na -atọ ụtọ. Amụrụ na Naples na 1929, ezinụlọ ya kwagara na South America na 1947, na -amanye ya ịhapụ ọrụ Chemistry, nke malitere n'isi ụtụtụ n'ihi ịdị mfe ya na ọmụmụ.
N'agbanyeghị nke ahụ, eee gụsịrị akwụkwọ n'iwu ma mụta ịsụ asụsụ 6 dị iche iche.
N'oge na-adịghị anya Ọ ga -apụta maka nka igwu mmiri ya. Na 1950 ọ ghọrọ onye mbụ na -egwu mmiri nke Italiantali tụfuru nkeji n'ime 100 freestyle (ọ bụ onye mmeri mba ahụ ugboro asaa), wee merie ọtụtụ nrite na egwuregwu Mediterranean dị iche iche.
Ugbua na Helsinki 1952 na Melbourne 1956 Egwuregwu Olympic Na mgbakwunye na igwu mmiri naanị ya, ọ so na ndị otu egwuregwu polo nke obodo ya, nke rutere n'agba nke abụọ n'asọmpi abụọ ahụ, ma sorokwa asọmpi ahụ na ndị Rome na 1960.
Akụkọ mgbe ochie nwere ya ọ bụ n'ime ọdọ mmiri ebe ọ ga -ezute ezigbo onye ọzọ na -egwu mmiri aha ya bụ Mario Girotti. Ọtụtụ afọ ka e mesịrị, onye ọ bụla ga -ewere aha dị iche, Girotti ga -ewere Terence Hill.
N'ime ihe onyonyo ya ihe nkiri 17 na Terence Hill na solo 20 ọzọ.
Mmalite ya na sinima
M na -esi n'ọnụ ụzọ nke sinima abanye onye agha nke Alaeze Ukwu Rom, na akụkọ ifo "Quo Vadis". Ọ bụ n'afọ 1950.
Mpụta mbụ ya na Terence Hill nọ na 1967, na ihe nkiri "Ị gbaghara ... m." Mana ihe ịga nke ọma mbụ ya ga -abịa na 1971 ya na "Ha kpọrọ ya Trinidad", ihe nkiri ga -egosi ụzọ nke ha abụọ ga -eso n'ọtụtụ aha na -esote.
Ụdị ya bụ sinima na -atọ ọchị Nnukwu ọgụ dabere na nnukwu mkpọtụ, ntụmadị na acrobatics, ọkachasị site na Terence Hill. Ha bụ ngwakọta zuru oke. Spencer tinyere obi ọjọọ nke ahụ ya, agwa ọjọọ ya, na Terence Hill bụ onye aghụghọ zuru oke, nwee obi ike na onye aghụghọ.
Ebee ka ị nwetara aha Bud Spencer? Ọ dị ka ọ bụ na 1967, na ngwakọta nke otu n'ime ndị na -eme ihe nkiri kachasị amasị ya, Spencer Tracy, na biya nke ika "Bud".
N'etiti ọtụtụ nka ọ nwere bụ egwu. N'ọtụtụ fim ndị o mere dị ka onye na -eme ihe nkiri, o dere ụda egwu na egwu ndị a na -eme n'ime ha. Na 1981, o hiwere ụgbọ elu ụgbọ elu Mistral Air, nke bụ nke Italian Post ugbu a.
Ọmarịcha ogbo ya na Terence Hill
Mmekọrịta dị n'etiti ha abụọ malitere n'afọ 1967 wee kwụsị n'afọ 1994. Ha niile ga -agba ihe nkiri iri na asaa.
Ihe nkiri na Terence Hill
"Ị gbaghara ... anaghị m eme" (1967)
Aha izizi: Dio ndo ... ọ bụghị Io!
-Eme ihe nkiri: Terence Hill, Bud Spencer, Frank Wolff, Gina Rovere, José Manuel Martín, Luis Barboo
N'ọdụ ụgbọ oloko Canyon obodo niile na -eche ka Onye ọka ikpe ọhụrụ nke Udo rute. Mgbe ụgbọ oloko rutere, ọ na -eme ya n'enweghị onye ọkwọ ụgbọ ala juru ozu.
Ndị ohi na ogbugbu mmadụ nwere njirimara niile nke onye gburu Bill San Antonio, onye egbe nke onye ọ bụla kwenyere na ọ nwụọla ogologo oge. Doc, onye egwuregwu ọkachamara, na -amalite nyocha ọnwụ adịgboroja nke Bill na -enwe olileanya inweta ọla edo niile ezuru. Earp, onye ya na ya na -arụbu ọrụ na onye ọrụ ugbu a na -enyere Doc aka, na -arụ ọrụ na ụlọ ọrụ nke ụlọ akụ ahụ mere mkpuchi mbupu ọla edo nke Bill San Antonio zuru.
Ọ bụ ihe nkiri mbụ ha jikọtara ọnụ yana nke mbụ na Cat Stevens na Hutch Bessy Trilogy.
"Ndị omekome anọ ahụ" (1968)
Aha izizi: Ahụrụ m Maria n'anya
-Eme ihe nkiri: Eli Wallach, Terence Hill, Bud Spencer, Brock Peters, Kevin McCarthy.
Akụkụ nke abụọ nke Cat Stevens na Hutch Bessy Trilogy na -egosi Cat na Hutch abata na El Paso. Ka ndị obodo na -arụ ọrụ na -akwadebe ogbugbu, ha rutere n'ụlọ akụ, ebe ha na -ebuga ego ruru $ 300.000 na ọla edo.
"Ugwu akpụkpọ ụkwụ ”(1969)
Aha mbu: Collina degli stivali, 1969.
-Eme ihe nkiri:Terence Hill, Bud Spencer, Woody Strode, Eduardo Ciannelli, Victor Buono, Lionel Stander, Alberto Dell'Acqua, Nazzareno Zamperla.
N'otu oge ahụ ndị bi na Nnwere onwe ville nwee anụrị n'ihe ngosi circus, Cat asaa ọ na -ezube imecha hapụ obodo. Mgbe ọ nwara iji ịnyịnya gafee obodo ime obodo, a na -eji mgbọ gbagbuo ya, yana nnukwu ihe isi ike, jiri ọnya egbe gbuo ya n'ahụ ya. Ọ bụ nkeji nkeji nke atọ na Cat Stevens na Hutch Bessy Trilogy.
«Ha kpọrọ ya Trinidad »(1970)
Aha mbu: Chiamavano Trinità
-Eme ihe nkiri: Terence Hill, Bud Spencer, Farley Granger, Elena Pedemonte, Steffen Zacharias, Dan Sturkie, Gisela Hahn, Ezio Marano.
Trinidad, otu n'ime ndị na -agba egbe ngwa ngwa na Wild West, chọtara nwanne ya nwoke nke okenye, onye ajọ njọ karịa onwe ya, dịka onye isi obodo ebe ọ kwụsịrị izu ike. Otu ndị Mọmọn udo nọ na mpaghara a, onye onye isi obodo ahụ na -ezube ịchụpụ n'ego ọ bụla. Trinidad kpebiri ịnọ ebe ahụ iji nyere nwanne ya nwoke aka ịgbachitere ndị Mormon.
"The Black Corsair" (1971)
Aha izizi: Ọ dị mma
-Eme ihe nkiri: Terence Hill, Bud Spencer, Silvia Monti, George Martin, Diana Lorys, Monica Randall, Sal Borgese, Pasquale Basile, Fernando Bilbao.
Onye ọkwọ ụgbọ mmiri Britain ama ama, Captain Blacke (Hill), chọrọ ịwakpo nnukwu ụgbọ mmiri Spain juputara na ọla edo. Ma ọ bụghị naanị ya, onye ọzọ na -apụnara mmadụ ihe; Okpokoro isi (Spencer), nwere otu ebumnuche. Na n'etiti ha ga-abụ ada nke osote eze nke ógbè ahụ.
"Ụmụ nwoke siri ike" (1971)
Aha mbu: Iụ forte, egwu!
-Eme ihe nkiri:Terence Hill, Bud Spencer, Reinhard Kolldehoff, Carlos Muñoz, Riccardo Pizzuti, Marcello Verziera, Sergio Bruzzichini, Cyril Cusack.
Ndị enyi abụọ na -enweghị ike ikewa ekewa, Salud na Plata, na -aga ụlọ akụ ka ha nweta ọrụ. Ha na -ezute ụfọdụ ndị ohi wakporo ụlọ ọrụ ahụ. N'ikpeazụ, ha na -agbapụ n'enweghị ihe ọ bụla, ha na -echekwa ego ha ... mana ha ga -agbaba na Colombia, ebe ha na ndị na -eme njem na ndị na -achọ emerald na -agwakọta. N'ebe ahụ, ha zutere otu onye ara mmanya na -egbu nke na -ekwu na ya nwere maapụ ogbunigwe. Mgbe ọtụtụ ihe egwuregwu gachara, ha ji ụgbọ elu ha nke gbabara. Na mgbe ahụ ọmarịcha ogbugba na -apụta nke ogbunigwe emerald.
"Ha nọgidere na -akpọ ya Trinidad" (1972)
Aha izizi: gaa n'ihu na Chiamarlo Trinità
-Eme ihe nkiri: Terence Hill, Bud Spencer, Yanti Sommer, Enzo Tarascio, Harry Carey Jr., Pupo De Luca, Jessica Dublin, Dana Ghia
Trinidad na nwanne ya nwoke "nwa ewu" na -aga n'ụzọ siri ike. Ha gbara ihe mgbaru ọsọ na -ezu ohi ụgbọ ala, mana onweghị onye nwere ego na ha. Ọ dabara nke ọma, ha rutere n'otu obodo ebe akpọrọ ha maka ezigbo "Rangers", iji chịkwaa otu ndị omekome ndị ụjọ jidere obodo ahụ.
"Ma ọ bụrụ na ọ bụghị, anyị na -ewe iwe" (1974)
Aha izizi: ltrimenti ci arrabbiamo
-Eme ihe nkiri: Terence Hill, Bud Spencer, Deogratias Huerta, John Sharp, Patty Shepard, Manuel de Blas, Luis Barbero, Donald Pleasence, Emilio Laguna
Ben na Kid bụ ezi ndị enyi, mana ha na -asọrịta mpi maka ihe nrite nke ịgba ọsọ ụgbọ ala, obere ụgbọ ala egwuregwu na -acha ọbara ọbara nwere elu edo edo. Mgbe ọtụtụ ihe egwuregwu gachara, ha na -eburu otu ebumnuche, yabụ minibolide bụ nke ha abụọ. Kedu ka esi ekesa ya? Kid na -atụ aro ka ha kpọọ ya "nye biya na soseji." Onye kacha a drinksụ na onye kacha rie nri ga -enweta ihe nrite. Mana ụfọdụ ndị omempụ nke onye ama ama na -achọkwa ụgbọ ala ...
"Ndị ozi ala ọzọ abụọ" (1974)
Aha mbu: orgi l'altra guancia
-Eme ihe nkiri: Terence Hill, Bud Spencer, Jean-Pierre Aumont, Robert Loggia, Mario Pilar, Salvatore Basile
Ndị ozi ala ọzọ abụọ nwere ntakịrị ihe ọjọọ mana ha raara onwe ha nye maka ebumnuche ha, biri n'agwaetiti paradaịs. Ha ga -ahọrọ inyere ụmụ amaala aka gbasara ebumnuche ọjọọ nke gọvanọ otu.
"Ndị uwe ojii abụọ" (1976)
Aha mbu: Abụọ abụọ fọrọ nke nta ewepụghị ibu ụkwụ
-Eme ihe nkiri: Terence Hill, Bud Spencer, David Huddleston, Luciano Catenacci, Ezio Marano, Luciano Rossi, Luigi Casellato, Edy Biagetti, Jill Flanter, April Clough
Ndị enyi abụọ nwere agwa dị iche iche, na -eme ihe ike dị egwu, ọ bụghị ndị na -akpachapụ anya mana ha nwere ezi obi, na -eme atụmatụ izu ohi na obere ụlọ ahịa. Dị ka ọ na -adị, ha na -eme obere nkwado maka mwakpo ahụ na mgbe ha mechara banye n'ime ụlọ, ha na -achọpụta na ọ bụ ọfịs na -ahụ maka ndị uwe ojii na tupu ha amata na e debara aha ha n'akwụkwọ.
Otu dị egwu (1978)
Aha izizi: Ọbụna na-adịghị mma
-Eme ihe nkiri: Terence Hill, Bud Spencer, Luciano Catenacci, Marisa Laurito, Kim McKay, Sal Borgese, Jerry Lester, Woody Woodbury, Carlo Reali, Giancarlo Bastianoni
Ọ bụ agha megide ịgba chaa chaa. Johnny nwere nwanne nwoke ọkara CharlieUgbu a onye na -anya gwongworo, mana onye bụbu onye egwuregwu ... Johnny rịọrọ maka enyemaka ya, mana ọ chọghị ịlaghachi na ụwa egwuregwu. Johnny na -aghọgbu gị site n'ịgwa gị nke ahụ enyi Ị kpuru ìsì ma chọọ ịwa ahụ dị oke ọnụ, kedu ihe ka mma karịa imeri ego site n'ịgba chaa chaa? Charlie na -akụziri Johnny aghụghọ ọ maara n'egwuregwu ahụ.
"Anọ m na hippos" (1979)
Aha izizi: Io sto na gli ippopotami
-Eme ihe nkiri: Terence Hill, Bud Spencer, Joe Bugner, May Dlamini, Dawn Jürgens, Malcolm Kirk, Ben Masinga, Les Marcowitz, Johan Naude
Tom Slim na -acha ọbara ọbara na enyi ya nwere abụba na ajị agba na -ezukọ n'otu obodo dị na Afrịka ebe Tom na -arụ ọrụ na -ahụ maka njem nlegharị anya, nke, maka nkwado Slim, ọ jisiri ike zụta ụgbọ ala. Ọ bụ ezie na nne na nna ha bụ nwanne, Slim na Tom abụghị otu, mana oge a, site na nkwekọrịta, ha na -ekweta imebi arụ ọrụ nke otu ndị na -ebubata anụ ọhịa ndị raara onwe ha nye ijide anụ ndị a kara aka maka ogige ụmụ anụmanụ, na -ebupu ha iwu na -akwadoghị. na nzuzo.
"Hasnye nwere enyi ... nwere akụ" (1981)
Aha mbu: Chi trova enyi, trova akụ
-Eme ihe nkiri: Terence Hill, Bud Spencer, Olalla Aguirre, Asuncion Balaguer, Louise Bennett, Sal Borgese, Enriqueta Carballeira, Carmen Conesa.
Alan gbapụrụ n'aka ndị otu Frisco Joe, onye ọ nwere nnukwu ego. N'elu ụgbọ elu ya, ọ na -ezute Charlie, onye ọkwọ ụgbọ mmiri na -anọ naanị ya. Alan na -ewere maapụ otu agwaetiti ebe nwanne nna ya Brandy, na -arịa ọrịa meningitis, na -ekwe nkwa na enwere nnukwu akụ zoro ezo. Mana ebe egosiri na maapụ bụ ụlọ agha ochie nke onye agha Japan gbachitere nke kwenyere na ọ ka nọ na Agha Secondwa nke Abụọ.
"Super Super Superspeakers" (1983)
Aha mbu: Nna camicia
-Eme ihe nkiri: Terence Hill, Bud Spencer, Buffy Dee, David Huddleston, Riccardo Pizzuti, Faith Minton, Dan Rambo, Susan Teesdale, Dan Fitzgerald, Harold Bergman.
Rosco, onye njem na -adịghị agwụ ike, chọtara Doug, nnukwu ajị agba nke a tọhapụrụ n'ụlọ mkpọrọ, n'ụlọ nri dị n'akụkụ ụzọ. Site n'enyemaka Doug, Rosco jisiri ike megwara ụfọdụ ndị ohi, mgbe ha hapụrụ ha banye n'ụgbọala, onye ọ bụla kwenyere na ọ bụ nke ọzọ, mana ọ nweghị nke ọ bụla n'ime ha nwere ụgbọ ala.
"Abụọ Super abụọ" (1984)
Aha izizi: Ọ bụghị n'ihi na ọ dị mkpa
-Eme ihe nkiri: Terence Hill, Bud Spencer, April Clough, Harold Bergman, CV Wood Jr., Dary Reis, Nello Pazzafini, José Van de Kamp, Fernando Amaral, Roberto Roney.
Ụmụ nwoke abụọ dịka Greg Wonder na Elliot Vance enweghị ọtụtụ ihe jikọrọ ha. Otu bụ onye na -apụ apụ, na -apụ n'ụlọ mkpọrọ ma na -egwu sax ugbu a n'ime obere ebe egwuregwu jazz. Nke ọzọ bụ onye njem na -eji oke ịnụ ọkụ n'obi arụ ọrụ ọ bụla. Ha abụọ bi ebe dị anya site na ibe ha, mana n'otu oge ahụ ụlọ ọrụ na -amaghị aha ha na -enye ha ọrụ nzuzo na ụgwọ dị oke ọnụ.
Ha ga -abụ okpukpu abụọ nke ndị Brazil abụọ bara ọgaranya ma nwee mmetụta, na -eme ka ha ga -eche ihe ize ndụ ndị gbara nde mmadụ ndị a gburugburu.
"Abụọ Super Cops na Miami" (1985)
Aha mbu: Yumna Supercops
-Eme ihe nkiri: Terence Hill, Bud Spencer, CB Seay, William Bo Jim, Ken Ceresne, Jackie Castellano, CV Wood Jr., Richard Liberty.
Di na nwunye ndị uwe ojii dị ịtụnanya ma dị iche iche nọ n'ụzọ nde dollar 20, nke ezuru na ohi afọ gara aga. Na nyocha ụdị ọnọdụ ọchị niile, ọgba aghara na ọgba aghara ga -eme.
Ụfọdụ ihe nkiri solo
Aha izizi: Piedone d'Egitto
Ndị na-eme ihe nkiri: Bud Spencer, Enzo Cannavale, Baldwyn Dakile, Angelo Infanti, Cinzia Monreale, Robert Loggia, Leopoldo Trieste
Kọmishọna Rizzo na onye nnọchi anya ya Caputto na -enyocha ntọrọ nwa nwanne nwanne nwanyị nke nwere nnukwu mmanụ, Connie Burns. Ndị otu "Swede" ga -ahụ maka ntọrị a.
"The Supersheriff" (1980)
Aha izizi: Chissà perché… capitano tutte a me
Director Michele hụrụ
Ndị na-eme ihe nkiri: Bud Spencer, Cary Guffey, John Bartha, Carlo Reali, Ferruccio Amendola, Giancarlo Bastianoni, Ottaviano Dell'Acqua.
Site na mbara ụwa dị anya, oghere oghere na-abata wee pụọ n'otu obere obodo a na-akpọ Monroe, nwa nwoke mara mma nke dị afọ iri na abụọ nke na-eji nwayọ eme enyi nnukwu Joe, onye a na-ahọpụtakwa sheriff nke obodo ahụ. N'oge na -adịghị anya, nwata nwoke ahụ na -egosi nnukwu ndị ike ya.
"Banana Joe" (1981)
Aha mbu: Banana joe
Ndị na-eme ihe nkiri: Bud Spencer, Marina Langer, Mario Scarpetta, Gianfranco Barra, Enzo Garinei, Giorgio Bracardi, Gisela Hahn
Banana Joe, nwoke bi na paradaịs agwaetiti na -enweghị ụdị azụmahịa ọ bụla, rutere n'ụgbọ mmiri ya n'ọdụ ụgbọ mmiri, ebe ha rịọrọ ya ka o nye ha ikike pụrụ iche n'akụkụ ụgbọ mmiri ya. Mgbe ị na -aga obodo iji mezuo ikike gị, ị ga -achọpụta ọganihu nke ndụ ọgbara ọhụrụ. Mgbe ị laghachiri n'agwaetiti gị, ihe niile ga -adị oke njọ.
Aha mbu: Superfantagen
-Eme ihe nkiri: Bud Spencer, Luca Venantini, Julian Voloshin, Diamy Spencer, Janet Agren, Tony Adams
Nwa nwoke dara ogbenye aha ya bụ Al haddin chọtara oriọna nke ọ na-akpọku onye maara ihe nke ukwuu, onye ga-enye ya ihe niile ọ chọrọ, site na isoro nwa agbọghọ ọ hụrụ n'anya wee nweta mmeri nke asọmpi mmiri.
"Na njedebe" (1997)
Aha mbu: Na njedebe
-Eme ihe nkiri: Juanjo Puigcorbé, Lydia Bosch, Béatrice Dalle, Bud Spencer, Mabel Lozano, José Manuel Lorenzo, Rafael Romero Marchent
Akwụsịre mmemme redio site na oku sitere na onye na -ekwu na ọ bụ ogbu nke ọtụtụ ụmụ nwanyị na Madrid, na -ekwupụta igbu mmadụ ọzọ maka otu abalị ahụ. Onye mara ọkwa na -enweta ihe ịma aka, ịgbaso egwuregwu iji chọpụta ebe onye ahụ metụtara, na -eso ụfọdụ ihe ngosi. Mana ọ bụ egwuregwu dị egwu.
"Ụmụ ifufe (n'etiti ìhè na ọchịchịrị)" (2000)
Aha izizi: Ụmụ ifufe
DirectorOnye edemede: José Miguel Juarez
Ndị na-eme ihe nkiri: Carlos Fuentes, Ursula Murayama, Jose Sancho, Bud Spencer, Jorge Galvan
Na mmeri ndị Spain sitere na Mexico, onye ọchụnta ego Spanish aha ya bụ Rodrigo hụrụ Tizcuitl, nwa nwanyị mara mma nke Eze Tlacopan, site n'ọchịchị n'okpuru ọchịchị eze ukwu Moctezuma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nye m oge ntụrụndụ » Cine » Ndị na -eme ihe nkiri » Ihe nkiri Bud Spencer kacha mma
Na Nọvemba… Norah Jones na Madrid
'Njem oge', ihe nkiri ọhụrụ nke Terrence Malick